Maro ireo fitarainana sy alahelon`ny mpifidy izay noverezin-jo ary tsy afaka mifidy noho ny antony maro. Noho izany, hametraka fitoriana amin`ireo porofo marobe eo am-pelatanany ny antoko TIM, hoy i Olga Ramalason, sekretera jeneralin`ny antoko. Raha tsy mahafa-po ny havoakan`ny fitsarana dia hijoro foana ny antoko fa tsy hitondra ny olona eny an-dalambe na hanao zavatra mihoa-pefy. Tsy afaka kosa hanakana ny alahelon`ny vahoaka sy izay tiany atao anefa ny TIM. Tsy eto an-drenivohitra ihany no nitranga ny fanodinkodinam-bato sy tsy fetezana, hoy izy. Tany Ifanadiana, ohatra, dia lany 100% ny ben`ny tanàna teo aloha. Mahavariana tokoa izany kanefa ambany ny taham-pavitrihana manerana ny nosy. Any an-toeran-kafa dia tena nahitana “bulletin pré-coché” marobe izay misy sonian`ny mpikarakara fifidianana ihany. Hentitra izy niteny fa hasehon`ny antoko TIM ireo tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fifidianana kaominaly sy monisipaly. Mametraka eo anatrehan`ny mpitsara ny feon`ny fieritreretana satria hanimba sy hanakorontana firenena raha tsy mijoro amin`ny fahamarinana ny tompon’andraikitra rehetra.